မြို့ပေါ်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ကျည်တွေမိုင်းတွေရှိ နေတဲ့ ပလက်ဝ
မြို့ပေါ်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ကျည်တွေမိုင်းတွေရှိ နေ...
26 พ.ค. 2563 - 00:43 น.
ကိုဗစ် -၁၉ ရောဂါ ကာလအတွင်း တပ်မတော်ဘက်က အပစ်ရပ် ကြေညာထားပေမယ့်လည်း ပလက်ဝမြို့မှာ နေ့စဉ် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီး ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ကျရောက်လာတဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်တွေ နဲ့ မြိုပေါ်မှာရှိနေတဲ့ မိုင်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့ ၊ ရိက္ခာရပ်ကွက် မှာ မေလ၂၃ ရက်နေ့က ဒေသခံ ဒေါ်မနီ ဟာ နေအိမ်အနီးမှာ စားစရာအတွက် ငှက်ပျောပင် ခုတ်သွားရာကနေ မိုင်းနင်းမိတာကြောင့် ပေါင်နဲ့ တင်ပါးမှာ မိုင်းစထိမှန်ပြီး ပလက်ဝမြို့မှာ ဆေးကုသ မှု ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ ချင်းစစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများ အရေးပေါ် ကူညီရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကော်မတီ (RRCI) က မိုင်နန်းဝေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
" မိုင်းထိတဲ့ လူနာ အမျိုးသမီးမှာက ၃ နှစ်ခွဲ အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အမျိုးသားက ပလက်ဝကနေ ဆမီးကိုဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ လိုက်သွားတာ ဧပြီလကတည်းက။ တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ သူ့အမျိုးသားက ပလက်ဝကို ပြန်မလာနိုင်တော့ ဆမီးမှာ ပိတ်မိနေတယ်။ ခုတော့လူနာအမျိုးသမီးရဲ့ ကလေးကို ရပ်ဆွေ ရပ်မျိုးတွေက ဝိုင်းထိန်းထားရတယ်" လို့ မိုင်နန်းဝေကပြောပြပါတယ်။
မိုင်းနင်းမိသူ ဒေါ်မနီဟာ ပလက်ဝဆေးရုံမှာပဲ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရပြီး လက်ရှိ အခြေအနေမှာ အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတုန်းဖြစ်တယ်လို့ မိုင်နန်းဝေက ဆိုပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့လယ်က မြန်မာ့စီးပွားရေဘဏ်ပရဝဏ်မှာလည်း ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းကလည်း လက်နက်ကြီးကျည်ကျတာကြောင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ ကလေး ၂ ဦးတို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ကလည်း ပလက်၀ ကုလားတန် မြစ်ကူးတံတာ အရှေ့ဖက် ကမ်းနားမှာ ည ၈ နာရီခန့်က လက်နက်ကြီးကျခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော် နဲ့ အေအေတို့ကြား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လကတည်းက ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ အခုဆိုရင် ပိုမို ပြင်းထန်လာပြီး ပလက်ဝမြို့ဟာ ကုန်းလမ်းကရော ရေလမ်းပါ အပိတ်ခံရတာကြောင့် တိုက်ပွဲရှောင်တွေ အများဆုံး ပိတ်မိနေတဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ် တစ်ခုလုံးမှာ စစ်ဘေးရှောင် အိမ်ထောင်စု (၂၄၁၄) ၊ လူဦးရေ (၁၁၁၂၃) ရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း ချင်းတိုင်းရင်းသား စစ်ဘေးရှောင် ဦးရေဟာ (၇၀၀၀) ကျော်ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိ ပလက်ဝနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ချင်းစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ စုစုပေါင်းမှာ (၁၈၁၂၃) ကျော်ရှိတယ်လို့ ချင်းစစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများ အရေးပေါ် ကူညီရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကော်မတီ (RRCI) ရဲ့စာရင်းများအရ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံအတွင်းတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ရာဒေသတွေမှာသုံးလကျော် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်နားထားပေမယ့် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့မှာတော့ နေ့တိုင်း ပစ်ခတ်သံတွေနဲ့ လက်နက်ကြီး ကျည်ပေါက်ကွဲတာတွေ၊ မိုင်းနင်းမိတာတွေဟာ ပလက်ဝမြို့ပေါ်မှတင် ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ပလက်ဝမြို့တောင်ဘက်ခြမ်း ရပ်ကွက်ဖြစ်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကို နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက်မှာ လက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်ကြီးကျတဲ့ အတွက် ပလက်ဝဒေသခံ ဦးထောင်ကိန်းရဲ့ နေအိမ် မီးဖိုချောင်ခန်းမှာ ပျက်စီးသွားပြီး မိသားစုတွေမှာ အခုချိန်အထိ နားတွေအူနေတာကို ခံစားနေရတုန်း ဖြစ်တယ်လို့ နေအိမ်ပိုင်ရှင် ဦးထောင်ကိန်းရဲ့သား ကိုကျော်ခင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဧပြီ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းကလည်း ပလက်ဝမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ပရဝဏ် နဲ့ သာယာဝဆိပ်ကမ်းတို့ကို လက်နက်ကြီးကျည် နှစ်လုံးကျခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ကလေးနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့မှာပဲ လက်နက်ကြီးကျည် ငါးလုံးနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ကျည် သုံးလုံးမှာ ပလက်ဝမြို့ပေါ်မှာရှိနေပြီး ဆာလာအိတ်နဲ့ ဖုံးထားတယ်လို့ မိုင်နန်းဝေက ပြောပြပါတယ်။
မိုင်နန်းဝေက " ဆာလာအိတ်နဲ့ ဖုံးထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့လည်း ခုမှ သိတာ။ ဘယ်သုံးနေရာလည်း ဆိုတာတော့ အတိအကျ မသိဘူး။ မြို့ပေါ်မှာလည်း ဘယ်သူမှ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မသွားလာရဲဘူးလေ" လို့ ပြောပါတယ်။
နေ့စဉ် လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပလက်ဝမြို့သူ မြို့သားတွေဟာ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သံ ငြိမ်မှ အပြင်ကို သွားလာ လှုပ်ရှားရဲသလို ညနေ ချောင်းတွင်း ရေချိုးဆင်းတာတွေကို လည်း အချိန်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချိုးနေရတဲ့အတွက် ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြို့ပေါ်မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ကျည်တွေမိုင်းတွေရှိ နေတဲ့ ပလက်ဝ